Heshiis laga gaarey khilaafkii Galkacayo
28 Sep 28, 2011 - 6:34:21 AM
Waxaa heshiis laga gaarey dagaalkii magaalada Galkacayo ka dhacey horaantii bisha Sept,2011 iyadoo halkaas dhowaan dirir labo maalmood socotey ku dhexmartey ciidamada dowlada Puntland iyo maleeshiyo beeleedyo difacayey kooxo halkaas ku dhuumaleysanayey.
Heshiikaan oo lagaga dhawaaqey qado sharaf Islaam Bashiir ku casumey dhamaan ergooyinkii ka qayb qaadatey howshaas ayaa waxaa lagaga iclaamiyey in khilaafkaas laga heshiiyey islamarkaana jiritaanka Puntland yahay mid muqadas ah.
Dowlada Puntland oo goobjoog aheyd kulankaas ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka amniga Khalif Ciise Mudan isaga oo goobta kaga dhawaaqey in Xukuumada aqabashey go'aanada Issimada ku xaliyeen khilaafkaas.
Garaad Maxamad Cilimi oo la hadley BBC-da laanteeda af-Somaliga ayaa sheegey in heshiis lagu xaliyey khilaafkaas uu dhacey iyadoo maalmaha soo socda kulan balaaran ka dhici doono magaalo madaxda Puntland ee Garowe.
Garaadka ayaa hoosta ka xariiqey in dhamaan wixii ka dhacey Galkacayo xaley dhaley laga noqdey islamarkaana la isku waafaqey in midnimada dadka reer Puntland muqadas tahay isagoo u mahadcelyyey dhamaan dadkii ka qayb qaatey xalinta is-maandhaafkaas halkaas ka dhashey.
Dhageyso wareysiga Garaad Maxamad Cilimi isaga oo la hadlaya BBC laanteeda Af-Somaliga.